US Advisories momba ny dia lavitra dia mahamenatra iraisam-pirenena: tambajotra fizahan-tany manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » US Advisories momba ny dia lavitra dia mahamenatra iraisam-pirenena: tambajotra fizahan-tany manerantany
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
COVID-19 dia nanova an'izao tontolo izao. Ity dia tokony hanisa ny fomba famoahana ny fampitandremana momba ny dia ihany koa. Etazonia irery no firenena tokana eto amin'izao tontolo izao manoroka ny faritaniny tsy mila fampitandremana. Etazonia ihany koa no tsy maintsy firenena tokana eto amin'izao tontolo izao izay mampiditra ny mpifanila vodirindrina amina lisitra "aza mandeha" avo indrindra. Ny Network World Network Network izay monina any Hawaii dia namoaka fanambarana miangavy ny Etazonia hanao ny fomba fampisehoana fampitandremana momba ny dia.
Ny fampitandremana momba ny dia dia navoakan'ny governemanta mba hiarovana ny olom-pireneny amin'ny heloka bevava, vonoan'olona ary ady.
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia namoaka fampitandremana momba ny dia ho an'ny olom-pirenena amerikana, ary ireo fampitandremana ireo dia misy fiantraikany amin'ny mpandeha tsirairay, fitsangatsanganana an-tsokosoko, fitsangantsanganana an-tsambo ary fivoriambe.
Ny fanoherana ny fampitandremana momba ny dia dia mety hisy, ho an'ny maso ivoho fizahan-tany, zotra fitsangantsanganana, na planina fihaonana, vokadratsin'ny toekarena na ara-dalàna.
The Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) androany dia namoaka fanambarana apetraka mba hamporisihana ny Departemantam-panjakana amerikana sy ny foibe misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina (CDC) handinika ny fanovana ny fomba famoahana sy fampitana ireo mpanolotsaina amerikana mandeha "firenena vahiny" ankehitriny.
"COVID-19 dia nanova ny zava-drehetra," hoy ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz. “Tsy mampino tsotra izao raha firenena toa an'i Bahamas na i Greece no voatanisa ao amin'ny sokajy mitovy amin'i Afghanistan na Korea Avaratra. Mahamenatra io ary saika ihomehezana. ”
WTN dia te hahita ambaratonga naoty 3 tsy miankina ho an'ny firenena tsirairay voatanisa ao amin'ny lisitry ny torohevitra momba ny dia nataon'ny Departemantam-panjakana amerikana na CDC.
1. Naoty miorina amin'ny olana momba ny fiarovana sy ny tsy COVID.
2. Naoty miorina amin'ny mpandeha tsy mitondra vaksiny COVID.
3. Naoty miorina amin'ny mpandeha vita vaksiny COVID.
Ny World Tourism Network dia mangataka ny hamafana an'i Guam, Puerto Rico, ary ny Nosy Virgin US amin'ny lisitr'ireo “firenena vahiny.”
Guam, Puerto Rico, ary ny Nosy Virgin US dia faritanin'i Etazonia fa tsy firenena vahiny. Teratany amerikana ny olona mipetraka ao. Tokony hoentina toy ny fanjakana amerikana hafa izy ireo. Ho an'ny governemanta amerikana hanasokajiana ny faritany amerikana misy fampitandremana momba ny dia 4 dia mahamenatra, ”hoy i Steinmetz nanampy. “Hitako fa tsy fanajana ireo mpikarakara amerikana marobe napetraka ao Guam io fanavakavahana io.”
Ny rafitry ny Departemantam-panjakana amerikana dia manaiky ny ambaratonga 4 amin'ny toro-hevitra momba ny dia:
Mitombo ny fitandremana
Diniho indray ny dia
Ny departemantam-panjakana amerikanina dia namoaka ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny Travel Advisories hamelezana ireto firenena manaraka ireto, tamin'ny filazany tamin'ny olom-pirenena amerikana: AZA MITSARA amin'ny firenena voatanisa:
Banky Andrefana Israel sy Gaza
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso ny aretina dia namoaka fampitandremana avo indrindra momba ireo dia «vahiny» manaraka:
Aza mandeha any amin'ireny toerana itodiana ireny. Raha tsy maintsy mandeha any amin'ireny toerana itodiana ireny ianao, dia alao antoka fa vita vaksiny tanteraka ianao alohan'ny dia.
Jersey (ampahany amin'ny UK)
Puerto Rico (Etazonia)
Ny fampitandremana momba ny dia dia navoaka faran'izay mafy - 1 hatramin'ny mafy indrindra - 4. Ny isa 4 dia midika loza mitatao, "aza mandeha." Amin'izao fotoana izao, ny Departemantam-panjakana dia tsy manavaka ny olan'ny fahasalamana sy ny ady ary ny filaminana.
Matetika izy io dia mampiasa fomba fitokonana lehibe, mandoko ny firenena iray manontolo miaraka amin'ny naoty mitovy, ary noho izany, miteraka fehin-kevitra diso
Ny mpanolotsaina avy amin'ny Departemantam-panjakana ankehitriny dia mandoko toerana toa an'i Afghanistan na Korea Avaratra miaraka amin'ny fampitandremana mitovy ankehitriny amin'ny firenena anisan'izany ny Bahamas na Jamaica. Ny toekarenan'i Bahamas ary Jamaika miankina betsaka amin'ireo mpitsidika amerikana.
Ho fanampin'izany, ny World Tourism Network dia mahita ny toro-hevitra momba ny US Travel ankehitriny momba ny Guam amin'ny faritany amerikana manaitra, manavakavaka ary mamitaka. "Ny Departemantam-panjakana amerikana sy CDC dia tsy manana fahefana hanoro hevitra momba ny fitsangatsanganana na hamoahana torohevitra manohitra ny faritany amerikana na fanjakana hafa," hoy ny Mary Rhodes, filohan'ny Fikambanan'ny Hotel & Restaurant Guam.
Mitaky fomba fiasa vaovao ny COVID ary tokony hisy ny fampitandremana momba ny dia mifototra amin'ny heloka bevava sy ny filaminana, ary fampitandremana faharoa ho an'ny COVID. Ireto fampitandremana farany ireto dia tokony hanavaka ny vaksiny amin'ireo tsy vita vaksiny ary handinika ny fisian'ny fitiliana haingana sy ny fanadinana mora tantana amin'ny serôlika rehefa miditra sy mivoaka ny firenena.
Ny famoahana torohevitra momba ny dia lavitra sy tsy takatry ny saina dia tsy ny korontana ara-toekarena ihany fa ny fampihenana ny fampitandremana momba ny dia, ny fanavakavahana ary ny olana ara-politika.
Ny WTN dia manentana ny Departemantam-panjakana amerikana sy ny foibe fanaraha-maso sy fisorohana ny aretina mba hamolavola fomba fiasa sy asa bebe kokoa mba hamoronana fahatapahan-kevitra sarotra kokoa an'ireo mpanolo-tsaina momba ny dia.
Ny fanambarana ny toeran'ny WTN dia nosoniavin'ny Filoha WTN Dr. Peter Tarlow.
Effie Fletcher hoy:
September 9, 2021 ao amin'ny 05: 17
Manaiky tanteraka ary misaotra anao!